Manamafy An’ilay Didim-pitsarana Navoakany ny Fitsarana Tampon’i Rosia
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Vietnamianina Xhosa Yorobà
18 JOLAY 2017
Nohamafisin’ny Fitsarana Tampon’i Rosia Ilay Didim-pitsarana Manameloka ny Vavolombelon’i Jehovah
Nanamafy an’ilay didim-pitsarana navoakany, izay mandrara ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia, ny Fitsarana tampon’i Rosia tamin’ny 17 Jolay 2017. Tsy nanaja ny fifanarahana iraisam-pirenena mamela ny olona hanaraka izay fivavahana tiany i Rosia rehefa nanao an’izany. Lasa voarara àry ny fivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah manerana an’i Rosia.
Nolavin’ireo mpitsara telo anisan’ny Filan-kevitra ao amin’ny Fitsarana Tampony Mandinika ny Fampiakarana Fitsarana ilay fangatahan’ny Vavolombelon’i Jehovah, ary nohamafisiny ilay didim-pitsarana navoakan’ny Mpitsara Yuriy Ivanenko tamin’ny 20 Aprily. Nanome rariny ny Minisiteran’ny Fitsarana io mpitsara io, ka nanaiky an’ilay fangatahana hoe: “Foanana ny Foibem-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia sy ireo Fikambanana Ara-pivavahana anisan’izy io, ary homena ny Federasionan’i Rosia ny fananan’ilay fikambanana rehetra.”
Mpahay lalàna ao amin’ny Foibem-pitantanan’i Vavolombelon’i Jehovah
Tandindomin-doza ireo Vavolombelon’i Jehovah 175 000 mahery any Rosia noho ilay didim-pitsarana. Hoy i Philip Brumley, mpanolo-tsaina momba ny lalàna ho an’ny Vavolombelon’i Jehovah: “Manahy mafy ny Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany hoe ho tandindomin-doza ireo rahalahiny sy anabaviny any Rosia. Toy ny manome rariny ny fampijaliana efa mihatra amin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia ny didy navoakan’ilay filan-kevitra. Vao mainka koa izy ireo henjehina hoatran’ny mpanao heloka bevava sy hampijaliana. Lasa voailikilika izy ireo nefa ao amin’ny taniny ihany.”
Nandefa fangatahana tany amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona sy tany amin’ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona ny Vavolombelon’i Jehovah. Mivavaka ireo mpiray finoana amin’izy ireo maneran-tany, mba hamerina handinika ny fanapahan-kevitra noraisiny ny fanjakana rosianina ary hanaja ny zo fototry ny Vavolombelona. Ho afaka ‘hanana fiainana tony sy milamina hatrany, ao anatin’ny fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra’ izy ireo amin’izay, araka ny 1 Timoty 2:2.